ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလူ ၁၀ ဦးစာရင်းထွက်ပေါ်လာ။ဘယ်သူက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလူလဲ? – Play Maker Sports Journal
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလူ ၁၀ ဦးစာရင်းထွက်ပေါ်လာ။ဘယ်သူက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလူလဲ?
ယခင်တုန်းကကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာအက်ရှ်လေကိုးကနေရောဘတ်တိုကားလို့စ်အထိ အရည်အသွေးမြင့်ဘယ်နောက်ခံလူများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဘယ်နောက်ခံလူကောင်းတွေလည်း ဘောလုံးလောကမှာမွေးထုတ်ပေးနေပါတယ်။
ဘယ်နောက်ခံလူနေရာကဘောလုံးကွင်းထဲမှာအမေ့ခံနေရာမဟုတ်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်ဘယ်နောက်ခံလူအချို့တို့ဟာကလပ်မှာရောလက်ရွေးစင်အသင်းမှာပါ ခံစစ်အတွက်သာမကတိုက်စစ်ပိုင်းကိုပါအထူးလိုက်ပါကစားနိုင်စွမ်းရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ကခံစစ်တာဝန်အပြင်ဖန်တီးမှု၊ဂိုးသွင်းမှု၊ဖရီးကစ်ကန်မှုစတဲ့တာဝန်တော်တော်များများကို ထမ်းဆောင်ကြပါတယ်။
ယနေ့မှာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလူ၁၀ဦးစာရင်းထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုထွက်ပေါ်လာတဲ့ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလူ ၁၀ဦးစာရင်းမှာပရိသတ်များမျှော်လင့်နေကြတဲ့သူတွေပဲ ပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးဘယ္ေနာက္ခံလူ ၁၀ ဦးစာရင္းထြက္ေပၚလာ။ဘယ္သူက ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးဘယ္ေနာက္ခံလူလဲ?
ယခင္တုန္းကကမာၻ႔ေဘာလုံးေလာကမွာအက္ရွ္ေလကိုးကေနေရာဘတ္တိုကားလို႔စ္အထိ အရည္အေသြးျမင့္ဘယ္ေနာက္ခံလူမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ဆက္တိုက္ဆိုသလို ဘယ္ေနာက္ခံလူေကာင္းေတြလည္း ေဘာလုံးေလာကမွာေမြးထုတ္ေပးေနပါတယ္။
ဘယ္ေနာက္ခံလူေနရာကေဘာလုံးကြင္းထဲမွာအေမ့ခံေနရာမဟုတ္ပါဘူး။အထူးသျဖင့္ဘယ္ေနာက္ခံလူအခ်ိဳ႕တို႔ဟာကလပ္မွာေရာလက္ေ႐ြးစင္အသင္းမွာပါ ခံစစ္အတြက္သာမကတိုက္စစ္ပိုင္းကိုပါအထူးလိုက္ပါကစားႏိုင္စြမ္းရွိၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။သူတို႔ကခံစစ္တာဝန္အျပင္ဖန္တီးမႈ၊ဂိုးသြင္းမႈ၊ဖရီးကစ္ကန္မႈစတဲ့တာဝန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကပါတယ္။
ယေန႔မွာကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးဘယ္ေနာက္ခံလူ၁၀ဦးစာရင္းထြက္ေပၚလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ယခုထြက္ေပၚလာတဲ့ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးဘယ္ေနာက္ခံလူ ၁၀ဦးစာရင္းမွာပရိသတ္မ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့သူေတြပဲ ပါဝင္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။
ဟာလန်းကို ဗြိတိန်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်း၁၅၀ ဖြင့် ချဲလ်ဆီးကမ်းလှမ်းမည်